Umaki: impi yesiphequluli | Martech Zone
Umaki: impi yesiphequluli
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 8, i-2006 NgoMsombuluko, Disemba 17, 2018 Douglas Karr
Ukubheka isabelo semakethe sakamuva seziphequluli kunikeza ukuqonda kokuthi ngubani onqobayo futhi ohlulwa yizimpi. IFirefox iyaqhubeka nokwakha umfutho, iSafari inyukela phezulu, kanti i-Internet Explorer ilahlekelwa ngumhlaba. Ngingathanda ukuphawula ngalaba abathathu 'ngemibono' yami ngokwenzekayo. I-Internet Explorer Ngemuva kokubhubhisa iNetscape Navigator, IE empeleni yaba yigolide esezingeni lenetha. Isiphequluli besilula, sisebenza, futhi silayishwe ngaphambilini ngayo yonke iMicrosoft Products.